महर्षि वेदव्यासको कालजयी सिर्जना « dainiki
११ मंसिर २०७८, शनिबार ०७:४५
हजारौँ वर्षअघि पराशर नाम गरेका महान् ऋषि थिए । अथाह ज्ञान भएका यी बुद्ध पुरुष पराशर महर्षिका नामले परिचित थिए । त्यसबेला समाजमा यस्तो परिस्थिति सृजना भयो, जहाँ राजाहरू सत्ता र शक्तिमा लिप्त भएर मात्तिन थाले अनि ब्राह्मणहरूको धर्मलाई सम्मान गर्न छाडे । साथै, धेरै हदसम्म ब्राह्मणहरू पनि भ्रष्ट भएका थिए, जसकारण आफूले पाउने गरेको श्रद्धा र सम्मान गुमाउँदै गए । यही द्वन्द्वको कारण समाजमा संघर्ष र मनमुटाव चुलिँदै गएको थियो ।
एकदिन पराशरको आश्रममा आक्रमण गरियो, जसपश्चात उनको खुट्टामा निकै गहिरो चोट लाग्यो । उनी जसोतसो त्यहाँबाट भागे, अनि निकै प्रयत्न गरेर डुङ्गा खियाउँदै एउटा सानो टापुमा पुगे, जहाँ केही माझीहरू बसोबास गर्दथे । उनको अवस्था देखेर माझीहरूले उनलाई आफूसँगै लिएर गए । उनको उपचार र हेरचाहको जिम्मा मत्स्यगन्धी लाई दिइएको थियो, जो त्यहाँका मुखियाकी छोरी थिइन् । मत्स्यगन्धी भनेको “माछाको जस्तै गन्ध उत्सर्जन गर्ने” भन्ने बुझिन्छ । मत्स्यगन्धी भर्खरकी युवती थिइन् । उनले पराशरको स्वास्थ्यको राम्रो ख्याल राखिन् । आफ्नो गम्भीर चोट निको नहोउञ्जेल उनी लगभग एक बर्षभन्दा बढी समयसम्म त्यहीँ माझीहरूसँगै बसे । उनको चोट निको भइसकेपछि पनि उनी कहिल्यै सिधा हिँड्न सकेनन् ।
पराशरको अपार ज्ञान र विवेकले भरिपूर्ण व्यक्तित्वप्रति मत्स्यगन्धी स्वाभाविक रूपमा आकर्षित भइन् । पराशर र मत्स्यगन्धीको बिचमा प्रेम सम्बन्ध बस्यो र अन्ततः एउटा बच्चाको जन्म भयो । तर त्यसबेलासम्म, पराशरको स्वास्थ्यमा राम्रो सुधार भइसकेको हुनाले उनले आफ्नो काम जारी राख्न गाउँ छाडे । नवजात शिशुको नाम कृष्ण द्वैपायन राखियो । त्यसबेला पनि “कृष्ण“ लोकप्रिय नाम थियो । “कृष्ण” को शाब्दिक अर्थ “आकर्षित गर्ने” हो । “द्वैपायन” को अर्थ “द्वीप वा टापुमा जन्मिएको” हो । उनी यमुना नदीको टापुमा जन्मिएका हुनाले उनको नाम कृष्ण द्वैपायन राखिएको थियो । यिनै बालक पछि ठूलो भएर महाभारत का रचयिता महर्षि व्यास बने ।
कृष्ण द्वैपायन हुर्किँदै गर्दा, बोल्न र बुझ्न सक्ने भएदेखि नै उनी आफ्नी आमालाई सोध्ने गर्थे, “मेरो बुबा को हो ?” उनकी आमाले उनलाई पराशर एक महान् पुरुष भएको बताउँदै थुप्रै अद्‌भुत कथाहरू सुनाउँथिन् । आफ्नो बच्चाले त्यहाँ बस्ने माझी समुदायबाट मात्र नभई आफ्ना बुबाको विवेक र ज्ञानबाट समेत केही सिकोस् भन्ने हेतुले उनी आफूले जानेका सामान्य तरिकाहरू अपनाउथिन् ।
आफूले कहिल्यै नदेखेको बुबाप्रति ठूलो श्रद्धा र सम्मान बोकेर उनी हुर्किँदै गए । द्वैपायनले जतिबेला पनि आफ्नी आमालाई सोध्ने गर्थे, “बुबा किन यहाँ बस्नुहुन्न ?” मत्स्यगन्धीले छोरालाई उसको बुबा महान् कार्यमा लागेका अनि सबैतिरबाट उनलाई आफ्नो ज्ञान र विवेक फैलाउनको निम्ति पुकारिएको हुनाले उनले यात्रा गरिरहनु परेको कुरा बताउँथिन् । त्यसपछि द्वैपायनले प्रश्न गर्थे, “उहाँ हामीसँग बस्न सक्नुहुन्न भने, किन हामी उहाँसँग जान सक्दैनौँ त ?” आमाले जवाफ फर्काउँथिन्, “उहाँ हामीलाई आफूसँगै लैजान सक्नुहुन्न, किनकि उहाँले विभिन्न प्रकारका परिस्थितिहरू सामना गर्नुपर्ने भएकोले जतिबेला पनि यात्रा गरिरहनु हुन्छ ।”
आफ्ना बुबा एक अद्‌भुत मानिस भएको थुप्रै कथाहरू सुनेको हुनाले, कृष्ण द्वैपायन आफ्ना बुबासँगै यात्रा गर्ने ठूलो धोको लिएर हुर्किँदै गए । उनको एकमात्र लक्ष्य भनेको आफ्ना बुबासँग यात्रा गर्नु थियो । उनले माझी बस्तीका अरू बच्चाहरूलाई भन्ने गर्थे, “मेरो बुबालाई ताराहरूको बारेमा थाहा छ, सूर्यको बारेमा थाहा छ, चन्द्रमाको बारेमा थाहा छ । उहाँलाई थाहा नभएको कुनै चीज नै छैन ।” उनीप्रति भनिएका यी कुराहरू पूर्णतया गलत थिएनन्, किनकि वास्तवमै पराशर त्यस किसिमका मानिस थिए ।
जब पराशर फर्किने समय भयो, द्वैपायनले भने, “म तपाईसँग जान चाहन्छु ।”
“तिमी एक अद्‌भुत बालक हौ, तर तिमी अहिले छ वर्षको मात्रै भएको छौ । तिमी मसँग आउन मिल्दैन ।”– पराशाराले भने ।
द्वैपायनले सोधे, “मैले दुई वर्षपछि मात्र गर्न सक्ने, तर अहिले गर्न नसक्ने त्यस्तो कुनै कुरा छ र ?”
तब पराशाराले भने, “तिमी मसँग मेरो छोरो भएर यात्रा गर्न मिल्दैन । मैले आफ्नो छोरोलाई सँगै लिएर विश्वभरि यात्रा गर्नु उचित हुँदैन । मेरा शिष्यहरू मात्रै मसँग जान सक्छन् ।”
द्वैपायनले भने, “त्यसो हो भने, मलाई आफ्नो शिष्य बनाउनुहोस् ।”
पराशरले पुन: भने, “तिमी अझै बालक छौ । छ वर्षको मात्रै भएको छौ । आफ्नी आमासँग अझ केही समय बिताऊ ।”
ब्रह्मचर्यको पहिलो दिन नै द्वैपायन आफ्नो भिक्षा माग्न बाहिर निस्किए । छ वर्षको सानो बालक आफ्नो बालसुलभ आवाजमा ‘भिक्षाम् देही” भन्दै भिक्षा माग्न गए । मानिसहरूले यो सुन्दर बालकलाई देखेर धेरै खाने कुराहरू दिए । आफू र आफ्ना गुरुका निम्ति माग्दै हिँडेको यो सानो बालकको दृढता देखेर उनीहरूले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म थुप्रै कुराहरू दिन्थे । उनले आफूले बोक्नै नसक्ने गरी खानेकुराहरू पाउँथे । एकदिन घर फर्कने क्रममा, उनले सडकमा यस्ता थुप्रै बच्चाहरू देखे, जसको अनुहार हेर्दा उनीहरूले धेरै दिनदेखि राम्रोसँग खान पाएका छैनन् भन्ने प्रष्टै बुझिन्थ्यो । उनले ती बच्चाहरूलाई सबै खानेकुराहरू दिए अनि रित्तो भिक्षा पात्र लिएर आफ्नो गुरुसमक्ष पुगे ।
रित्तो भाँडो बोकेर आएको देखेर पराशरले बालकलाई सोधे,“के भयो ? भिक्षा माग्न गएनौँ ? कि कसैले पनि केही दिएनन् ? किन रित्तो पात्र लिएर आएको ?” द्वैपायनले भने, “सबैले मलाई धेरै खानेकुराहरू दिनुभएको थियो, तर मैले बाटोमा खान नपाएका स–साना भाइबहिनीहरू देखेँ, त्यसैले मैले सबै खानेकुरा उनीहरूलाई दिएँ ।” पराशरले उनलाई हेरेर भने, “ ए ! ठीक छ ।” त्यस दिन द्वैपायन भोकै बसे ।
प्रकाशित मिति: ११ मंसिर २०७८, शनिबार ०७:४५